Ny Valosoa, 18 Jolay 2017. Ireo vaovao misongadina. Gervais Rakotoarimanana, Ny Fitondrana tsy mahomby, Hvm, Tim … | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Rtoa Vonintsalama Andriambololona, ministry ny Fitantanam-bola.
The Ballad of Lucy Jordan – Marianne Faithfull. →
Miaha-vaky ny sambon’ny fitondrana
Tsy te ho tratra farany ny ministra Gervais R.
Ity no tonga amin’ilay fitenenana hoe: miha-vaky ny sambon’ny fitondrana ka tsy te ho tratra farany ny ministra Gervais Rakotoarimanana, ministry ny fitantanam-bola sy ny tetibola. Nanambara tamin’ny fomba ofisialy omaly ity ministra ity tamin’ny alalan’ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny Hotel Carlton Ampefiloha, fa nametra-pialana tsy ho ao anatin’ny governemanta intsony izy. Nambarany tamin’izany fa ny zoma lasa teo izy no nametraka ny taratasy fangatahana fametraham-pialana tamin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Raha ny fanazavany dia tsy mitovy ny fomba fijery, izao no natao ihany koa hoy ity ministra ity noho ny mangarahara, ny fandalana ny fahamarinana ary ny fikatsahany hatrany ny tombontsoa iombonana. Izany no midika fa misy ny zavatra afempenina ao anivon’ny fitondrana ao, misy ny zavatra tsy mandeha amin’ny rariny sy ny hitsiny ary ny tsy kely indrindra dia tombontsoan’olom-bitsy no arovan’ny fitondrana fa tsy ny fikatsahana ny tombontsoa iombonana araka ny nilazan’ny Ministra Gervais Rakotoarimanana azy.
Ankoatra izany, nosoritany fa be no vitany tao anatin’ny 2 taona izay, toy ny fifanaraham-piaraha-miasa tamin’ny Tahirimbola Iraisam-pirenena na ny FMI sy ny fiverenan’ny fahatokisan’ireo mpamatsy vola samihafa vokatr’izay lalana nosokafan’ny fifandraisana amin’ny FMI izay. Azo ny famatsiam-bola FEC, Fond Elargi de Crédit, ho fanampiana ny mizanam-pifanakalozana ara-bola na ny balance de paiement. Fitivan-tanindrazana no niverenany teto an-tanindrazana hoy ny ministra, raha tarafina amin’izany teniny izany dia tsy misy fitiavan-tanindrazana mihitsy ny mpitondra amin’izao fotoana fa fitiavan-tena no betsaka ka nahatonga azy nametra-pialana, tsy ho tratra farany ho tratry ny mety ho fitsaram-bahoaka amin’ny fomba samy hafa ato ho ato: na main’ny alalan’ny fifidianana izany, na amin’ny fomba hafa ihany koa,…
Fialan’ny ministra Gervais R.
Aloka maity ho an’ny fitondrana Rajaonarimampianina
Aloka mainty ho an’ny fitondràna HVM sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fametraham-pialàna nataon’ny minisitry ny vola Gervais Rakotoarimanana omaly . Asa na fifandrifian-javatra na misy antony manokana fa tena nifanandrify tamin’ny nivoahan’ny vola vaovao 20 000 Ar , 10 000 Ar, 5 000 Ar, ary 2 000 Ar ny nanaovany izany izay midika zavatra hafa ihany eo anatrehan’ny vahoaka Malagasy . Raha ny minisitra Gervais R. aloha no resahana dia niavaka tamin’ireo minisitra ao anatin’ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier , teknisiana izy ary tsy mba dia niondana politika tahaka ny sasany ka ny HVM no atao lohalaharana fa nandeha araka ny fahitsiana teo amin’ny fitondràna ny depertemanta tantaniny. Tsy nanaiky mora ny hamoahana vola tao amin’ny kitapombolam-panjakàna amin’izao fotsiny izy , izay efa nampimenomenona ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza ny toetrany tsy ahazon’ireto farany moramora ny tombontsoa tadiavin’izy ireo, indrindra ny antokon’ny fitondràna HVM no tena nimenomenona tamin’izany .
Efa namoahan’ny gazety antsoratra mpomba ny fitondràna lahatsoratra an-gazety fanaratsiana mihintsy aza ity minisitra ity fa sakana amin’ny famahàna olana eto amin’ny firenena hono , toy ny resaka delestazy , eo koa ny tsy famoahana moramora ny CLD . Ka eto, maro ny olompirenana no maneho fankasitrahana ny fihetsika nasehon’ingahy minisitra satria tsapany fa misy zavatra tsy mandeha ao matoa izy miala . Mety efa nilaza ny heviny izy , nefa ny lehibe mihintsy no sarotra hatoro dia aleo manaja tena . Dia inona indray izao no valin-kafatra ataon’ny mpitondra HVM manoloana izao fametraham-pialàn’ny tompon’andraikitra lehibe eto amin’ny firenena izao ? mbola hahita lalana hialana pà ihany ve araka ny tenin-jatovo ka hanilika amin’ny minisitra Gervais Rakotoarimanana ny tsy fahombiazany indray ny fitondràna?
Kestora Guy Rivo R.
Voaporofo ny ahiahin’ny TIM tamin’ny fametram-pialàn’ny minisitry ny vola
Nanambara ny heviny ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) tamin’ny alalan’ny solombavambahoaka sady kestora faha- 3 ny Antenimierampirenena, Guy Rivo Randrianarisoa, mikasika ny raharaham-pirenena ankehitriny , indrindra taorian’ny fametraham-pialàn’ny tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena, ny minisitry ny vola Gervais Rakotoarimanana .
Tsy dia mahagaga loatra hoy ity farany ny fametrahana fialàna nataon’ny minisitry ny vola , efa tsapanay solombavambahoaka fa tsy mitovy fijery amin’ny fitondràna ny mangarahara amin’ny governemanta namany ny minisitra Gervais Rakotoarimanana . Ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa tamin’ny fankalazàna ny fetin’ny Frantsay teny Ivandry nanambara fa vizana ny mpamatsy vola miresaka ny momba an’i Madagasikara . Resaka azo lazaina fa mifandray avokoa izany rehefa mandinika ny raharaha miseho ankehitriny . Nanambara ny minisitry ny vola teny amin’ny CARLTON fa tsy mitovy ny fomba fijery amin’ny mpitondra izy amin’ny fenitra tokony harahina , fa ilaina ny mangarahara .
Misavoritaka tanteraka ny fitondràna ankehitriny hoy ny solombavambahoaka Guy Rivo , ilaozan’ny fanjakàna miady amin’ny MLE , miady amin’ny TIM hankalaza ny tsingerintaona faha-15 nahaterahany, fa tsy ny fitadiavana vola hampandehanana ny raharaham-pirenena no atao , izao aza vao mainka mitombo ny fahavoazana fa niala ny minisitry ny vola . Sarotra ny fiainan’ny Malagasy ankehitriny hoy ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) , governemanta mahasintona ny mpamatsy vola hampandrosoana ny firenena izao no tadiavina,i zao tsy mbola mivoaka araka ny tokony ho izy ny vola tamin’ny diniky ny mpamatsy vola an’i Madagasikara tany Paris sy Afrika Atsimo , nefa herintaona sisa no fotoana hitondran’ny HVM . Amin’ny maha mpanohitra ny antoko TIM dia tsy ny toerana mpanohitra no mahamaika fa ny fampisehoana ny tsy mety eto amin’ny firenena hanatsaràna ny fiainan’ny vahoaka , aiza no toerana ahafahan’ny mpanohitra maneho hevitra amin’izany ?
Raha mikasika ny fankalazàna ny faha- 15 taona ny antoko TIM indray dia hatao ao anatin’ny ara-dalàna ny hanaovana azy ary tsy maintsy hatao eto Antananarivo . Tsy mitombina ny filazan’ny gazety fa hatao amin’ny 22 jolay ny fety , mbola ho lazaina amin’ny manaraka ihany hoy ny depiote Guy Rivo Randrianarisoa ny daty hanaovana izany .
Tsy mampilamina ny firenena ny fanafenana ny marina ataon’ny fitondrana
Tsy mitsahatra mitombo hatrany ireo raharaha lehibe mitranga eto amin’ny firenena tsy hita fiafaràna tato anatin’izao fitondrana Hvm izao. Miafina ho an’ny vahoaka ny Marina ary lasa tompon-trano mihono izy amin’izao fotoana izao. Iza no mpanafina ny Marina eto ary maninona no afenina ?
Anisan’ny raharaha lehibe tsy fanta-piafaràna ny toy ny raharaha Antsakabary izay nanapotehina ny fananam-bahoaka na ny fiainany mihitsy. Tsy hita izay tohin’ny fanadihadiana momba izany hatreto ary ny fitondrana Rajaonarimampianina tsy ahitana taratra ny hamoaka ny marina momba izany raharaha izany. Eo ihany koa ny raharaha Soamahamanina izay mampitabataba mafy ny vahoaka any an-toerana mandraka ankehitriny nefa odian’ny fitondrana Hvm fanina sy tsy hamakiany loha.
Tsy hita ho miaro vahoaka na manohana azy ny fitondrana, fa ny an’ireo vahiny sinoa no toa arovana mafy, f’inona no antony? Tsy fantatra ny marina! Andrasan’ny vahoaka ny momba ny fanadihadiana ny raharaha nahafaty olona teny Mahamasina ny taona 2016 nandritry ny fankalazana ny fetim-pirenena. Tsy hita ihany koa ny tohin’ilay raharaha teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, izay nisian’ilay Kolonely nanao barofo tao amin’ny ladoany naka an-keriny ilay volamena sarona saika ho entina mivoaka any ivelany. Inona marina no miafina ao ambadik’iny toe-javatra nanaitra sain’ny maro iny? Iza ilay kolonely ary nirahin’iza?
Tsy ho fantatra ny marina momba izany! Manginy fotsiny ny raharaha Claudine Razaimamonjy izay manomboka ampirimina mangina sy antsokosoko ka atao avokoa ny fomba hanarian-dia ny vahoaka. Tsy ho fanta-piafaràna toy ireo raharaha maro hafa ihany koa ny amin’io?Anisany zava-nisy teto amin’ny firenena ihany koa, ary niteraka resabe sy nampanahy ny maro dia ny amin’ny resaka nandeha, fa nanao fivoriana an-tampony teto ilay fikambanana miafina “franc maçon”, izay iaraha-mahalala, fa misy ifandraisany amin’ny satanika, ary tsy hitondra soa ho an’ny vahoaka sy ny firenena izany, mba tsy ilazana hoe zava-doza mitatao. Tsy hahitan-teny na kely aza amin’izany anefa ny fitondrana kanefa izany tena iankinan’ny fiainam-pirenena. Mampieritreritra…
Mbola maro ireo tsy voatanisa zary tsy ampahafantarina ny vahoaka ny Marina momba azy. Raha aravona , fitondrana mpanafina ny marina tokony ho fanta-bahoaka ity fitondrana Hvm ity. Nahoana no tsy ambara amin’ny vahoaka ny marina momba ireny raharaha samihafa ireny? Ny tsy tokony hohadinoina, ny fanafinafenana ny marina eto amin’ity firenena ity izay mahakasika ny fiainam-bahoaka dia tsy hitondra filaminana velively eto. Anisany antony lehibe tsy mampilamina eo amin’ny sehatra samihafa eto amin’ny firenena ny fihetsiky ny fitondrana Rajaonarimampianina. Rehefa mihaino azy any amin’ny “fotoam-bita”, dia tsy andrenesana na teny kely aza momba izany. Iza ary no mahazo tombontsoa amin’izao tsy filazana ny marina eto amin’ny firenena izao?
Ny mpanafina ny marina naman’ny mpandainga…
Tsy misy hetsika ifanandrinana amin’ny fitondrana ankoatran’ny grevy
Maro ny hetsika entin’ny ankolafin-kery, antoko politika, sendika, fikambanana samihafa, misy ao amin’ny firenena iray hitakiany izay heveriny ho zo hananany na hanomezana azy ny andraikitra feno hanasoavana ny mpiray tanindrazana aminy. Iaraha-mahalala fa misy lafiny roa miiba sy miabo eo amin’ny fiarahamonina ny hetsika rehetra atao. Raha ny eto Madagasikara manokana no hadihadiana dia efa saiky nanao izany avokoa ny hery velona tsy ankanavaka : fikambanana tsotra, fokonolona, antoko politika, sendika, mpianatra eny hatramin’ny tafika aza,… ary ny grevy nataon’ny mpianatra tamin’ny taona 1972 no niatombohan’izany.
Amin’ny ankapobeny anefa dia hampangain’izay mitondra ho misy hery politika manosika ambadika izay endrim-panoherana mitranga rehetra. Taorian’iny grevin’ny mpianatra iny dia tsy nisy fitokonana niteraka fionganan’ny fanjakana teto fa na fipoahana ara-tsosialy na fanonganana ara-dalàna araka ny fahefana ananan’ny andrim-panjakana iray na fiarovana ny safidim-bahoaka no nampidaraboka ny repoblika telo nifandimby. Misy miezaka mandresy lahatra fa fipoahana ara-tsosialy no nampiongana ny Repoblika III-3 kanefa raha tsy teo ny fihokon’ireo miaramila tao amin’ny Capsat sy ny fanosehana ambadika nataon’ny firenena ivelany dia tsy tanteraka iny raharaha 17 Martsa 2009 iny.
Mety ho marina ihany ny fisian’ny ambadika pôlitika saingy tsy maintsy dinihana tsara ny votoatiny sy ny fototry ny olana nahatonga ny hetsika satria tsy misy afaka fa misy ny fitakiana ara-tsosialy sy ara-piarahamonina madio tahaka izay ataon’ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony tato ho ato. Porofon’izany ny grevin’ny mpianatra ao amin’ny polyteknika eny Vontovorona farany teo izay nijaly tokoa teo amin’ny fianarany noho ny delestazy ka sady tsy afaka nahandro sakafo no tsy afaka nifantoka tamin’ny famerenan-desona niatrehana ny fanadinana. Torak’izany koa ny tao amin’ny Sekoly Ambony manofana mpampianatra (Ecole Normale Supérieure) ao Ampefiloha izay nihoa-pampana be ny saram-pisoratana anarana. Noho ny maha tanora ireo mpianatra anefa dia matetika misy ny mihoa-pefy sy tsy voafehy ka izay no nahatonga ireny fandorana kodiarana fiarakodia ireny, na izany na tsy izany tsy ireny hetsika ireny velively no hifarana amin’ny fanonganam-panjakana.
Tsy zoviana ihany koa ny toe-draharaha mafanafana eto amin’ny Firenena toy ny ao Soamahamanina izay mampihetsika ny mponina ho fanoherana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna harena ankibon’ny tany izay miteraka fikorontanan’ny tontolo iainana sy mahatonga lonilony eo amin’ny mpiaramonina. Na eo aza ny firotsahan’ny Emmo-Reg namoretana ny mponina sy ny fanohanana nataon’ny politisiana sasany dia tsy misy ambadika pôlitika ny raharaha ary tsy ny hetsika ao an-tanàna iray (manifestation locale et isolée) no hampiongana fanjakana. Asa raha fifandrifian-javatra na ahoana fa mitaky ny fahaleovantenany ireo rafitra rehetra eto amin’ny firenena izay mihevitra fa tokony hanana zo amin’izany araka ny anarany sy araka ny lalàna nampijoroana azy rahateo. Anisan’izany ny fitsarana tamin’ny alàlan’ny Sendikan’ny Mpitsara noho ny raharaha Razaimamonjy Claudine izay mitaky amin’ny fitondrana ny hanomezana azy ny « fahefany » (pouvoir judiciaire) sy ny tsy tokony hisian’ny tsindry avy amin’ny fahefana mpanatanteraka intsony amin’ny raharaham-pitsarana rehetra. Noho io raharaha io ihany koa dia nanao fanadihadiana ireo manampahefana voasaringotra amin’izany ny Birao Mahaleotena Miady amin’ny Kolikoly (Bianco) ary miezaka miala amin’ny tsindry ataon’ny manampahefana isan-tokony ihany koa.
Taorian’ny fanambaran’ny Vondrona Erôpeana momba ny tokony hisian’ny fifidianana mangarahara sy marina ary handraisan’ny olompirenena malagasy tsirairay zo hirotsaka kandidà amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ny taona 2018 dia nanambara toy izany koa ny masoivoho frantsay tamin’ny kabariny ny 14 Jolay 2017 teo, andro fankalazan’i Lafrantsa ny fetim-pireneny. Ity farany moa tsy mba afaka manao fitokonana entiny mitaky izany fahaleovantenany izany. Ny mampanahy ny mpanara-baovao anefa dia na hanana izany aza ny Ceni dia tsy afaka manao na inona na inona kosa hampangarahara ny fifidianana any amin’ny biraom-pifidianana manerana ny Nosy satria ny manampahefana rehetra any dia voafehy sy voabaikon’ny fahefana mpanatanteraka. Mety hitokona indray koa ny sendikan’ny mpiasa ao amin’ny orinasam-pirenena Jirama noho ny tsy faneken’izy ireo ny fanendrena ny tomponandraikitra vaovao ao izay tsy manome hasina ny fahaiza-manaon’ny mpiasa amperin’asa. Fivoriambe no nantsoin’ny sendika ny sabotsy lasa teo ary tsy mbola tonga amin’izany fitokonana izany aloha.
Antony ara-pôlitika ve no mampihetsika ny sendika sa antony ara-teknika? Niaraha nahita ihany koa anefa fa nisy mpitarika sendika ao amin’ny Jirama ihany niteny tao amin’ny haino aman-jery tsy miankina iray misaotra sy manohana ireo tomponandraikitra vaovao voatendry ireo. Fomba entina hitakiana sy hanerena ny fitondrana hanatanteraka izay zavatra nekeny omena ny fitokonana kanefa tsy ny hetsika etsy sy eroa ataon’ny hery samihafa misy eto amin’ny firenena no mety hampiongana ny fitondrana iray fa ny firaisankinan’ny rehetra hanohitra ny tsy rariny sy ny fanagejana ary ny famoretana mianjady aminy.
Any aorian’ny bacc no hanaovana izany
Taorian’ny 8 jolay saika hankalazàna ny faha- 15 taona ny antoko Tiako i Madagasikara tao amin’ny kianjaben’i Mahamasina dia mivoaka indray ny fanaratsiana totoafo ataon’ny mpomba ny mpanongam-panjakàna sasany sy ny ao amin’ny antokon’ny fitondràna rehefa hitan’ireto farany fa nahomby ny zavatra nataon’ny TIM , na tsy tanteraka aza izany satria dia vahoaka marobe no nanatitra an-tongotra ny filoha Marc Ravalomanana teny amin’ny trano fonenany teny Favohitra. Hita amin’izany ny fampiasàna ireo mpanao serasera mpikarama an’adin’ny fitondràna, tonga dia hita be satria mivohy zavatra iray mikasika ny filoha Marc Ravalomanana izy ireo , mampitovy zavatra tsy mifandray akory amin’ny zavatra ataon’ny sasany mba hisamborana an’i Dada . Atao laza masaka amin’izany fa misy mizana tsindrian’ila hono eto satria samy midina andalambe izao , nefa ny sasany migadra , ny sasany mandeha ho azy .
Dia tsorina aminareo mpitaty ràn-kena mpampiady angely sy mpikarama an’ady ireo fa ny filoha Marc Ravalomanana tsy mitovy aminareo mpanongam-panjakàna sy mpiaro seza ireo . Nandeha araka ny lalàna avokoa ny zavatra natao rehetra tamin’ny 8 jolay fa tsy tahaka ny nataonareo . Nahazo alalana soa aman-tsara tamin’ny prefektoran’Antananarivo eo ambany fiahian’ny praiminisitra ny TIM ny 30 jona , fa nivadihan’ity farany andro maromaro taty aoriana.
Nisy ny fitoriana natao vokatr’izany , mbola nandresy tany amin’ny tribonaly miady amin’ny fanjakàna indray ny TIM . Koa ahoana moa no hitovizan’i Riana Andriamandavy VII sy Lylson amin’ny filoha Marc Ravalomanana amin’izany? Izao no izy, 8 taona katroka izao ianareo tsy nahalala afa-tsy ny manaratsy ny filoha Marc Ravalomanana , marary ny sainareo raha tsy manonona izany Ravalomanana izany . Nanao ahoana anefa ny filoha Marc Ravalomanana 8 taona taty aoriana? Maty izy sa velona ? volamena nilatsaka am-bovoka izy , ka tsy avelan’ny soa tsy hamiratra .
Ka izao mbola tsy maintsy atao ny fankalazàna ny faha- 15 taona ny antoko Tiako i Madagasikara amin’ny fotoana maha mety izany araka ny nambaran’ny filoha nasionalin’ny TIM Marc Ravalomanana teny Ivandry ny zoma teo fa tsy amin’ny 22 jolay izay inian’ny sasany voizina ankehitriny dia aza sakatsakanana fa ho asehon’ny vahoaka fanindroany indray fa mamim-bahoaka izany DADA izany na haratsiana fatratra aza . Araka ny vaovao voaray, ao aorian’ny fanadinana bacc no ho tanterahana io fanamarihana indray ny faha-15 taonan’ny antoko TIM io, dia ho manala azy vita bacc koa izany ny an’ny antoko TIM sy ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka ao aorian’ny fotoam-panadinan’ny mpianatra io.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Claudine Razaimamonjy, Gervais Rakotoarimanana, Hery Rajaonarimampianina, Marc Ravalomanana, Ny Valosoa gazety, TIM. Ajoutez ce permalien à vos favoris.